Mampitandrina ny olom-pirenena amerikana rehetra ny departemantam-panjakana amerikana mba 'hiala avy hatrany any Irak'
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Mampitandrina ny olom-pirenena amerikana rehetra ny departemantam-panjakana amerikana mba 'hiala avy hatrany any Irak'
Ny olom-pirenena amerikana rehetra dia asaina “miala Irak eo noho eo ”avy amin'ny Panjakana. Navoaka androany ny fampitandremana nataon'ny governemanta amerikana.
Ny fampitandremana dia tonga taorian'ny famongoran'i Etazonia an'i Qassem Soleimani - komandin'ny tafiky ny Quds Force Iran, mpitarika zokiolona mariazin'ny milisy Shiita Iraqi fehezin'ny fitokonana an'habakabaka akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Baghdad ny zoma maraina.
"Ny olom-pirenena amerikana dia tokony hiala amin'ny alàlan'ny zotram-piaramanidina raha mbola azo atao, ary raha tsy mahomby izany, mankany amin'ny firenen-kafa amin'ny alàlan'ny tany," hoy ny toro-kevitry ny State State. "Noho ny fanafihana ataon'ny milisy tohanan'ny Iran ao amin'ny tobin'ny Masoivoho amerikana [any Baghdad], mihantona avokoa ny hetsika consular ho an'ny daholobe mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka."
Nilaza ny Pentagon fa ny fikomiana hanafoanana an'i Qassem Soleimani dia "natao hanakanana ny drafitra fanafihana Iraniana ho avy."
Ny sekreteram-panjakana amerikana Mike Pompeo dia nilaza fa nanolo-tena “de-escalation” i Washington taorian'ny “hetsika fiarovana nataony hamongorana an'i Qassem Soleimani.” Tao anatin'ny andiana bitsika misy teny mitovy amin'izany, nilaza i Pompeo fa efa niresaka tamin'ny sekretera vazaha britanika Dominic Raab, diplaomaty ambony sinoa Yang Jiechi, ary ny minisitry ny raharaham-bahiny alemana Heiko Maas momba ny famonoana.
Nanome toky ireo manampahefana Iraniana fa hanome “valifaty mahery vaika” amin'i Etazonia amin'ny fahafatesan'i Soleimani, izay nampitandremana ny Mpitarika Faratampony Ali Khamenei fa "hisy valifaty miandry ireo olon-dratsy izay nitafy tànana tamin'ny ràny."
Lufthansa Group hanakarama mpiasa vaovao maherin'ny 4,500 amin'ny tsenany an-trano amin'ny taona 2020
Fanondranana olona an-tsokosoko ao amin'ny magazay miisa 7 iraika ambin'ny folo sy Circle K?